Dagaal Qadhaadh ayaa ka qarxay Dalka Chat | maakhir.com
Dagaal Qadhaadh ayaa ka qarxay Dalka Chat
Njamena:- Dagaala faraha lagaga gubtay ayaa galabta casar liiqii ka qarxay Dalka Chat kaasi oo la sheegay inuu u dhexeeyo Mucaaradka iyo Dawlada Dalkaasi,waxa la soo tabinayaa inuu Dagaalkaasi markii hore ka qarxay meel waxa yar u jirta Caasimada Dalka, iyada oo uu markii danbe sii laba lixaadsaday.
Wararku waxay sheegayaan in dhowaaqa madaafiicda culus ee dagaalkaasi laysugu adeegsanayo laga maqlayo bartamaha magaalada Njamena, waxayna mararka qaar ay u muuqataa madaafiicdaasi inay soo durkeyso, Kumanaan Ruux aya alaabtoodii madax ku qaatay kuwaasi oo u yamaaya Dhulka Duurka si ay halkaasi ugu bad baadiyaan Naftooda.
Rasaas xoogan ayaa la maqlayaa waxaana xoogaga mucaaradka ay sheegeen inay qabsadeen afar xaafadood oo ka mid ah magaalada caasimada, laakin lama xaqiijin karo warkaasi, waxaana jirta xaalad cabis oo ka taagan magaalada guud ahaan iyadoo wadankaasi ay isaga qaxayaan dadka shisheeyaha, safaaradah ku yaala Caasimada ayaa la sheegay inay ka huleeleen shaqaalihii Ajaanibka ahaa ee goobahaasi ku sugnaa.
Wararka ayaa sheegaya inay Ciidamada Dalka France ee ku sugan Dalka Chad ay bilaabeen dad guraynta Dadka Ajaanibka ah ee ku sugan Dalkaasi,kuwaasi intii aanu dagaalkaasi qaraxin loogu baaqay inay ku diyaar garoobaan Goobaha loo cayin si loogu keeni Gaadiidka Cirka.
Wasiirka arimaha dibada ee Dalka Chad Amad Allam-Mi, ayaa sheegay in shaley oo jimce ah si xoogan loo jabiyey ciidamada mucaaradka, lagana ilaalinayo inay soo galaan caasimada.
« Afh hayeenkii Gobolka Banaadir ayaa xalay la dilay
Xoogahayaha Warfaafinta Maamulka Maakhir oo la kulmay Masuuliyiinta kala duwan ee ka tirsan Maamulka »